LUK 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (LUK 1)
Tiofilọs onyenwe m, ọtụtụ agbalịala otu ha nwere ike idetu nꞌakwụkwọ, akụkọ banyere ihe nile Chineke sitere nꞌaka Jisọs mezuo nꞌetiti anyị.
Ndị ahụ dere ihe a, dere gwa anyị ihe ha hụrụ na nke ha nụrụ site nꞌọnụ ndị ji anya ha hụ ihe ndị a mgbe ha mezuru. Ha dekwara ihe ha nụrụ site nꞌọnụ ndị ozi Jisọs ndị kwusara ozi ọma ahụ.
Ebe ọ bụkwa na mụ onwe m eleziela anya nke ọma nyochaa akụkọ ndị a nile, site na mgbe ihe nile bidoro ruo nꞌọgwụgwụ ya, ekpebiela m idere gị akụkọ ahụ nile nꞌusoro dị ka ihe nile siri mee.
Ana m eme nke a nꞌihi na achọrọ m ka i nwee afọ ojuju na ihe nile e ziri gị banyere ozi ọma ahụ bụ eziokwu.
Akụkọ a bidoro nꞌoge eze Herọd na-achị ala Judia nile. Nꞌoge ahụ kwa, e nwere otu onye nchụaja ndị Juu a na-akpọ Zakaraya. O so nꞌotu ndị nchụaja a na-akpọ Abaija. Otu a na-ejekwa ozi nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke dị na Jerusalem. Zakaraya nwere nwụnye aha ya bụ Elizabet, onye a mụkwara nꞌezinụlọ ndị nchụaja.
Zakaraya na nwụnye ya biri ezi ndụ nꞌihu Chineke. Ha debere iwu na ụkpụru nile Chineke nyere na-enweghị ntụpọ ọ bụla.
Kama ha amụtaghị nwa, nꞌihi na Elizabet enweghị ike ịtụrụ ime. Nꞌoge akụkọ a bidoro, Zakaraya na Elizabet emeela nnọọ agadi.
Otu ụbọchị, mgbe òtu Abaija ketara ịrụ ọrụ nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ, Zakaraya sokwara na-arụ ọrụ nke o ketara ịrụ dị ka onye nchụaja nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ. Nꞌoge ahụ kwa a họpụtara Zakaraya ka ọ bụrụ onye ga-abanye nꞌime ime ụlọ nsọ ahụ ịchụ aja nsure ọkụ nke e ji ụda na-esi isi ụtọ achụ.
Ọrụ ya ga-abụ ịkpọghachite ọtụtụ ụmụ Izirel nꞌebe Onyenwe ha na Chineke ha nọ.
Geekwa ntị ka m gwa gị! Ebe ị jụrụ ikwenye nꞌihe m gwara gị, a ga-anapụ gị ike ikwu okwu. Ị gaghị ekwukwa okwu ọ bụla, tutuu ruo mgbe okwu a m gwara gị mezuru. Nꞌihi na okwu a m gwara gị ga-emezu mgbe oge ya ruru.”
Mgbe Zakaraya mesịrị pụta, o nwekwaghị ike ikwuru ha okwu. Nꞌihi na ọ bụ aka ya ka o ji gwa ha okwu. Ha ghọtara na ọ ga-abụ na Zakaraya ahụla ọhụ nꞌime ụlọ nsọ ahụ.
Mgbe oge ịrụ ọrụ ya nꞌụlọ nsọ ahụ gwụsịrị, Zakaraya laghachiri azụ nꞌụlọ ya.
Ọ dịkwaghị anya site nꞌoge Zakaraya lara, Elizabet nwụnye ya tụụrụ ime. O zoro onwe ya nꞌime ụlọ ha ọnwa ise.
Mgbe ihe si otu a mee, mkpu ọṅụ si nꞌọnụ Elizabet pụta. O kwuru sị, “Lee ka Onyenwe anyị siri meere m ebere! O wepụla ihe ihere gaara abụ nke m nꞌihi amụtaghị nwa.”
Chineke ziri ya ka o jekwuru otu nwagbọghọ na-amaghị nwoke, onye ndị mụrụ ya kwere nkwa ịkpọnye Josef nwa nwa Devidi, ka ọ bụrụ nwụnye ya.
Lee anya, ị ga-atụrụ ime, mụọ nwa nwoke, onye aha ị ga-agụ ya bụ Jisọs.
Nwa nwoke a ga-abụ onye ukwu, onye a ga-akpọkwa Ọkpara Chineke kachasị elu. Chineke ga-eme ya ka ọ bụrụ eze. Ọ ga-enyekwa ya ocheeze Devidi nna nna ya.
Ọ ga-abụ onye ga-achị ndị Izirel ruo mgbe ebighị ebi. Ọchịchị ya agakwaghị agwụ agwụ.”
I chetara Elizabet onye ikwu gị? Agadi ahụ? Ndị mmadụ sị na ọ gaghị amụlitekwa nwa, ma gịnị mere ugbu a? Ọ dị ime ọnwa isii ugbu a o merela agadi.
Na-atụfughị oge, Meri jikeere jiri ọsọ gaa nꞌotu obodo nta dị nꞌugwu Judia.
Mgbe o ruru nꞌobodo nta ahụ, ọ banyere nꞌụlọ Zakaraya, kelee Elizabet.
O tiri mkpu nꞌoke olu sị, “Onye a gọziri agọzi ka ị bụ nꞌetiti ụmụ nwanyị nile. Onye a gọziri agọzi ka nwa ahụ ị ga-amụ bụkwa.
Onye kwanụ ka m bụ, o ji bụrụ na nne Onyenwe m ga-abịa ileta m?
Nꞌihi na mgbe m nụrụ olu ekele gị, nwa nọ m nꞌafọ wuliri elu nꞌọṅụ.
Nꞌihi na Chineke eledatala anya ya, lekwasị m, bụ ohu ya, dị ala. Site ugbu a gaa nꞌihu ọgbọ nile ga-akpọ m onye a gọziri agọzi.
Nꞌihi na Chineke Onye pụrụ ime ihe nile emeelara m ihe dị ukwuu. Aha ya dịkwa nsọ.
Ọ na-eji ihe dị mma na-enyeju ndị agụụ na-agụ afọ. Ma ndị ọgaranya ka ọ na-ezipụ nꞌaka efu.
O nyerela Izirel ohu ya aka. O chefukwaghị nkwa o kwere na ya ga-emere ha ebere.
Nꞌihi na o kwere nkwa na ya ga-emere Eberaham na ụmụ ụmụ ya ebere ruo mgbe ebighị ebi.”
Meri nọnyeere Elizabet ọnwa atọ. Mgbe oge a gasịrị, ọ laghachiri azụ nꞌobodo nke aka ya.
Mgbe oge zuru ka Elizabet mụọ nwa, ọ mụrụ nwa nwoke.
Mgbe nwa ọhụrụ ahụ nọzuru abalị asatọ, ndị ikwu ha nile na ndị enyi ha bịara, nꞌihi na ọ bụ nꞌụbọchị ahụ ka a ga-agụ nwa ọhụrụ ahụ aha. Dị ka omenala si dị, ndị ahụ bịara abịa kpebiri na a ga-agụ ya Zakaraya, nke bụkwa aha nna ya.
Ma Elizabet fufere isi sị ha, “É, è! A ga-agụ ya Jọn.”
Ndị ahụ jụrụ ya ajụjụ sị ya, “Nke a ọ bụ nꞌihi gịnị? O nwekwanụghị onye ọ bụla nꞌetiti ndị ikwu unu na-aza ụdị aha ahụ.”
Ya mere, ha jụrụ Zakaraya nna nwanta ahụ. Ma ebe ọ bụ na ọ naghị anụ ihe ha na-ekwu, ha ji aka ha jụọ ya ajụjụ a.
Zakaraya rịọrọ ka ha wetara ya mpempe akwụkwọ. Mgbe ha wetara ya, o depụtara aha nwanta ahụ nꞌakwụkwọ ahụ. Aha ọ sị na a ga-akpọ ya bụ “Jọn”. Nke a juru mmadụ nile anya.
Ma nꞌoge ahụ kwa Zakaraya nꞌonwe ya bidokwara ikwu okwu, malite na-eto Chineke.
Ibubo nwụrụ ndị nile nọ nꞌebe ahụ nꞌahụ. Otu a kwa akụkọ ihe ndị a mere gbasara ruo ndị nile bi nꞌobodo dị ebe ahụ gburugburu ntị.
“Ka anyị toonụ Onyenwe anyị Chineke Izirel otuto, nꞌihi na ọ bịala inyere ndị ya aka, na ịgbapụta ha.
dị ka o kwuru na ọ ga-eme site nꞌọnụ ndị amụma ya dị nsọ,
na ọ ga-azọpụta anyị site nꞌaka ndị iro anyị na sitekwa nꞌaka ndị nile kpọrọ anyị asị.
“O kwekwara nkwa na ya ga-emere nna nna anyị ha ebere, chetakwa ọgbụgba ndụ ya na ha gbara.
Ọ ṅụkwara iyi nye Eberaham nna anyị
nꞌụzọ dị nsọ na nꞌụzọ ezi omume. Ka anyị si otu a bụrụ ndị ga-eguzo nꞌihu ya ụbọchị nile nke ndụ anyị.